‘वर्षमा सय रुपैयाँ खर्च गरे मिर्गौलाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ’ [सक्दो सेयर गर्नुहोस्]
January 15, 2018	Comments Off on ‘वर्षमा सय रुपैयाँ खर्च गरे मिर्गौलाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ’ [सक्दो सेयर गर्नुहोस्]
हाँडीगाउँका सन्दिप जोशीले आफ्ना बुबालाई मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानु भयो । अस्पतालमा सुरुमा उहाँले आफ्नै खर्चमा बुबाको मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुभयो ।एकदुई पटक आफ्नै खर्चमा उपचार गरेपछि मात्रै उहाँलाई थाहा भयो कि मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क हुन्छ भन्ने । त्यसपछि उहाँले आफ्नो वडाबाट कागजात बनाई मिर्गौलाको डायलासिस निःशुल्क गराउनुभयो । जोशीलाई मात्रै होइन धेरैजसोलाई थाहा नै छैन सरकारले मिर्गौलाको डायलासिस दुई …
आफ्नै रेस्टुरेन्टमा बोलाएर गरे गायक राजेश पायलले नायिका केकीलाई विहेको प्रस्ताव
January 15, 2018	Comments Off on आफ्नै रेस्टुरेन्टमा बोलाएर गरे गायक राजेश पायलले नायिका केकीलाई विहेको प्रस्ताव
गायक राजेश पायल राईले आफ्नो चर्चित गीत ‘दर्शन नमस्ते’ नाम राखेर एक रेस्टुरेन्टको सुरुवात गरेका छन् । यसै साताबाट सुरु भएको सो रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गर्न कला जगतका केही व्यक्ति र पत्रकारलाई बोलाएर गरे ।नेपाली सुगम संगीतमा राज गरिरहेका राजेशको मनले खाएकी सिनेकर्मीको भने नायिका केकी अधिकारीले मात्रै प्रतिनिधित्व गरिन । धेरै चलचित्रमा गीत गाएका र चलचित्रकर्मीसँग निकट रहेका राजेशको रोजाइमा …
समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मोडलले आफु विक्रिमा रहेको खुलासा गरिन्
January 15, 2018	Comments Off on समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मोडलले आफु विक्रिमा रहेको खुलासा गरिन्
गरीव र लाचार ब्यक्तिले आफ्नो जीन्दगी जिउने विभिन्न तरिका अपनाउन बाध्य हुन्छ । गरिवीको चपेटाबाट मुक्ती पाउन मानिसले समाजिक बन्धनलाई पनि तोड्न पछि हट्दैन । यस्तै भारतीय एक मोडलले गरीवीबाट मुक्त पाउन आफु बिक्रिमा रहेको खुलासा गरेकी छिन् । भारतको गुजरातमा बस्दै आएकी मोडलले बिक्रिमा भएको उल्लेख गर्दै समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मार्फत आफुलाई लिलामको सुचिमा चडाएकी छिन् । उनले गरिवी …
रेखाले यी नायकसँग दिएकी थिइन् अहिलेसम्मकै कामुक सिन, यस्तो छ सत्यता!
January 15, 2018	Comments Off on रेखाले यी नायकसँग दिएकी थिइन् अहिलेसम्मकै कामुक सिन, यस्तो छ सत्यता!
बलिउडको इतिहासमा भारतमा यस्ता धेरै चलचित्रहरू छन् जुन अश्लील दृश्यहरूले भरीएका छन्। कुनै चलचित्रमा पुरै अश्लील दृश्य मात्र हुन्छ। उनीहरूको उद्देश्य नै अश्लीलता देखाउने हो। तपाईले पनि हेर्नु भएको छ होला केहि चलचित्रमा अनावश्यक बोल्ड दृश्यहरुलाई देखाइएको हुन्छ। चलचित्रलाई चर्चामा ल्याउन र हेडलाइन बनाई राख्नको लागि उनीहरुले यस्तो अनावश्यक दृश्यहरु हाल्छन्। भनिन्छ, जसको नाम धेरै प्रख्यात छ उसको नाम त्यति …
जाडो मौसममा तपाईको छालालाई नरम बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् यो क्रिम र लोशन !
January 15, 2018	Comments Off on जाडो मौसममा तपाईको छालालाई नरम बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् यो क्रिम र लोशन !
जाडो मौसममा छालामा नरम कायम राख्नका लागि क्रिम र लोशन लगाउनु आवश्यक हुन्छ। तर यो तब फाइदाजनक हुन्छ जब यसको प्रयोग लामो समयसम्म गरीन्छ। यसैलाई अनुमान गर्दै यी दुई नयाँ उत्पादनहरू सुरू भएको छ जुन तपाईको छालाको लागि हरेक तरीकामा सर्वश्रेष्ठ छ । यो लोशनले छालाको नरमपनालाई कायम राख्नेछ अरोमा लिफ(Aroma Leaf) ले हालै कोको अल्मन्ड मोइस्चराइजिंग लोशनको उत्पादन गरेको …
एउटा यस्तो ठाउँ, जहाँ गएपछि कोहि पनि बाँचेर फर्किदैन: आखिर के छ त्यस्तो त्यहाँ ?
January 15, 2018	Comments Off on एउटा यस्तो ठाउँ, जहाँ गएपछि कोहि पनि बाँचेर फर्किदैन: आखिर के छ त्यस्तो त्यहाँ ?
पृथ्वीमा केहि त्यस्ता ठाउँहरु पनि छन् जुन अत्यन्तै भयानक छन कि जहाँ गईसकेपछि कुनै मानिसहरुको बाँच्ने सम्भावना हुँदैन या अत्यधिक कम हुन्छ । यस्तै एउटा टापु इटालीमा पनि रहेको छ । संसार भर ‘आइल्याण्ड अफ डेड’ को नामले चिनिने इटालीको प्रोवेग्लिया टापुमा सन् १९२२ मा मानसिक अस्पताल निर्माण गरिएको थियो । तर यस अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर तथा नर्सहरुले प्रायःजसो …
यस्ता केही चिजहरु , जस्लाई हामीले जीवनभर सधैँ गलत रुपले नै प्रयोग गर्यौं र गरिरहेका छौं, जुन जान्नै कुरा
January 15, 2018	Comments Off on यस्ता केही चिजहरु , जस्लाई हामीले जीवनभर सधैँ गलत रुपले नै प्रयोग गर्यौं र गरिरहेका छौं, जुन जान्नै कुरा
हामीले प्रायजसो घर वरिपरि , अफिसमा र स्कुलमा प्रयोग गर्ने समानहरुलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्छौं । तर आफूले प्रयोग गर्ने तरिका नै सहि छ भन्ने कुरा हामी ठान्दछौं । आज हामी तपाईंलाई यसैबारे जानकारी दिन्छौं । हामीले प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरु विभिन्न उद्येश्यका साथ बनाइएको हुन्छ । यसको सहि प्रयोगबारे तपाईंलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ । १) इरेजर (मेटक): तपाईंले …
January 15, 2018	Comments Off on बाहुबली-२ का यी पाँच सन्देश: जसले तपाइँलाई जीवनभर दिन सक्छ सफलता र अत्यधिक खुसि!
बहुबाली -२ (द कन्क्लुजन) भारतीय सिने नगरिकै सर्वाधिक सफल चलचित्र बन्न पुगेको छ। फिल्ममा देखाईएका कुराहरु तथा नायक नायिकाले गरेको ड्रेसअपले हाम्रो जीवनमा ठुलै प्रभाव परेको पाइन्छ । चाहे त्यो गजनी फिल्ममा अमिर खानले काटेको हेयर कटको कुरा गरौँ या कोरियन चलचित्रको प्रभावबाट चुज पेन्ट लगाउने प्रचलन। चलचित्रमा भएका घटना र दृश्यको फलो गर्दै मानिसहरुले अचम्मका कार्य तथा अपराध नै …
यसरी निधारबाटै थाहा हुने, तपाई धनी बन्नुहुन्छ या ज्ञानी ?
January 15, 2018	Comments Off on यसरी निधारबाटै थाहा हुने, तपाई धनी बन्नुहुन्छ या ज्ञानी ?
पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत ज्योतिष शास्त्रलाई एक बैज्ञानिक शास्त्र नै मानिन्छ। त्यसैले होला यसलाई ज्योतिष विज्ञान पनि भन्ने गरिन्छ। ज्योतिषीहरूले हाम्रो जन्ममिति, हात या राशी हेरेरै हाम्राबारे धेरै भविष्यवाणी गर्ने गर्छन् सत्य साबित भएका धेरै उदहारणहरु पनि छन्। त्यसमाथि ज्योतिष बिज्ञान अन्तर्गत निउमेरिकल बिधिबाट गरिने भविष्यवाणीलाई त धेरै हद सम्म सबैले मान्ने गरेका पनि छन्। आज हामी तपाईलाई यस्तो नयाँ कुरा …
घुँडा दुख्ने समस्या ठिक गर्छ कागतीले !,तर कसरी ?
January 15, 2018	Comments Off on घुँडा दुख्ने समस्या ठिक गर्छ कागतीले !,तर कसरी ?
आजकल धेरै मानिसलाई घुँडा दुख्ने समस्या छ । यसका लागि मानिसहरू अनेकथरीका औषधि प्रयोग गर्छन् तैपनि रोग निको हुँदैन । यहाँ हामी घुँडा दुखाइ निको पार्ने घरेलु तरिका बताउँदैछौं जसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गडबडी हुँदैन र पीडाबाट पनि मुक्ति पाइन्छ । पट्टी बनाउने तरिका: – पीडाबाट छुटकारा पाउनका लागि रोल गरिएको सर्जिकल पट्टी, दुई चम्चा नरिवलको तेल र तीन कागती लिनुस् …
आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती
January 15, 2018	Comments Off on आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती
आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा नविन प्रविधीहरुको विकास भएको छ र यसको उचित प्रयोग हुनसके कुनैपनी क्षेत्रको विकास हुनमा लामो समय कुरी रहन पर्दैन । प्रविधिको विकासक्रमले कृषी प्रणालीमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।विकशित देसहरुमा प्रविधीकै प्रयोगले गर्दा छोटो समय अनी थोरै लगानीमा प्रसस्त उत्पादन गरेर निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई …
January 14, 2018	Comments Off on बाँदरले जिस्काउँदा युवतीको कपडा नै च्यातिएपछि
पुरुषले महिलालाई जिस्काउँछन् यो त सुनिएकै कुरा हो तर, जनावरले जिस्काएको सुनिएको छैन् ।तर, जयपुरको लिडी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने वीरपुरका महिला बादरको सिकार हुने गरेका छन् । बाँदरहरु महिलालाई घरबाट निस्कनै अप्ठेरो पारिदिन्छन् । पीडित महिलाहरु भन्छन्– बाँदरहरु नबोलाएको पाहुँना जसरी एकदमै नजिक आउँछन् र गाला, कानमा पञ्जाले हानेर भाग्छन् । यति मात्रै होइन यिनीहरु कपडा समातेर आफूतिर तान्छन् …
बलिउडका यी हिट कलाकार जोसँग छैन भारतीय नागरिकता
January 14, 2018	Comments Off on बलिउडका यी हिट कलाकार जोसँग छैन भारतीय नागरिकता
बलिउडमा त्यस्ता कयौं कलाकार छन् । जो भारतीय नभएपनि स्टार बनेर चिनिन सफल छन् ।यो सूचीमा अभिनेत्री कट्रीना कैफ पनि अटाउछिन् । उनी भारतीय नभएपनि बलिउड अभिनयमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल देखिएकी छन् । कट्रीना मात्र होइन बलिउडमा केही यस्ता अभिनेता, अभिनेत्री छन् । जो बलिउड अभिनयमा सफल छन् तर उनीहरुको नागरिकता भारत बाँहिरको रहेको छ । दीपिका पादुकोण दीपिका …
चीनले बनायो १ खर्ब २० अर्बमा यस्तो पार्क, जहाँ एलियन भेट्न पाइन्छ !
January 14, 2018	Comments Off on चीनले बनायो १ खर्ब २० अर्बमा यस्तो पार्क, जहाँ एलियन भेट्न पाइन्छ !
एलियनसँग भेट्ने वा ड्रागनसँग लड्ने चाहना छ भने तपाइँ चीनको यो पार्क जान सक्नुहुन्छ ।चीनको ग्वेझोउ इलाकामा एक थीम पार्क बनाइएको छ । आगामी डिसेम्बरमा यो पार्कको निर्माण पूरा हुनेछ । यो पार्कको विशेषता के भने यहाँका सबै चिज वास्तविक जस्ता लाग्दछन् । अर्थात् तपाइँ छुट्टै संसारमा पुगेजस्तो अनुभव गर्नुहुनेछ । कहीँ एलियन घुमिरहेका हुनेछन् त कहिले तपाइँको अगाडि ड्रागन …
बरु ज्यान जाला तर, महिलाले कहिल्लै भन्दैनन् आफ्ना यी रहस्य
January 14, 2018	Comments Off on बरु ज्यान जाला तर, महिलाले कहिल्लै भन्दैनन् आफ्ना यी रहस्य
भनिन्छ, महिलाहरु रहस्यका पर्याय हुन् । प्रायः महिलाको जीवनमा कैयन रहस्य र राज हुन्छन्, तर त्यसबारे उनीहरुले कहिल्यै मुख खोल्दैनन् ।सोशल मिडियामार्फत हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलाहरुसँग सोधिएको थियो, ‘तपाईं के कुरा हाम्रो श्रीमान वा प्रेमीसँग कहिल्यै बताउनु हुन्न ?’ रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै थाहा भयो कि, के कुरा हो त्यस्तो जुन महिलाहरुले कहिल्यै भन्दैनन् । पूरानो अफेयरबारे लाग्ला तपाईंको जीवनसाथी …
Page 40 of 427« First...1020303839404142»506070...Last »